Ny fomba haingana sy mora indrindra amin'ny fanafainganana ny tranokalanao | Martech Zone
Tamin'ny alàlan'ny mpamatsy fampiantranoana ahy dia nampahafantarina ahy CloudFlare. Gaga be aho tamin'ny serivisy… indrindra ny vidiny fanombohana (maimaim-poana). Rehefa niasa tamina mpamatsy lehibe SaaS aho dia nanamboatra serivisy geocaching izahay ary vola an'aliny dolara isam-bolana no laninay. CloudFlare dia tsy natsangana ho an'ny mpamatsy SaaS, fa tonga lafatra ho an'ny tranonkalanao na bilaoginao.
CloudFlare dia serivisy izay mampiasa teknolojia fananan-tany hampandehanana ny tranokala ho azo antoka sy haingana kokoa manerantany. CloudFlare dia mitantana ivon-drakitra 12 ankehitriny (miaraka an-dàlana bebe kokoa) amin'ny kaontinanta telo hanomezana cache cache, sivana bot ary maro hafa. Ity misy topy maso amin'ny serivisy:
Ny serivisy dia efa nahafinaritra ho an'ny Martech Zone. Topazo maso ny Analytics etsy ambany, indrindra ho an'ireo tabilao eo am-pototry ny tatitra.
Talohan'ny nampiasako ny CloudFlare dia nihoatra ny fetran'ny fampiasako ny kaontiko fampiantranoana aho. Ny CloudFlare dia nanapaka an'io fampiasana io tamin'ny antsasaky ny fanakatonana ny pejy pejy antsasaky ny tapitrisa ary nitahiry bandwidth 5Gb mahery. Raha te hahalala ianao amin'ny fomba ataon'ireto rafitra ireto… dia napetraka isam-paritra manerana ny firenena ireo ivon-tahiry. Rehefa misy olona ao amin'ny faritra jeografika mangataka ny pejinao, dia voatahiry eo an-toerana ilay pejy. Rehefa mitsidika ny olona manaraka - fa tsy manompo amin'ny mpizara anao intsony, ny foibe data CloudFlare eo an-toerana no manompo ny pejy.
Ho fanampin'izay, hatramin'ny nampiasako ny serivisy dia nahita fihenam-bidy lehibe tao amin'ny BOT SPAM nametraka hevitra aho. Hita fa miasa tsara ny CloudFlare amin'ny fanakanana izany fifamoivoizana izany tsy hahatratra ny mpizara ihany koa. Ny fitsikerana hitako tao amin'ny Internet momba ny CloudFlare dia ny tsy fanateran'izy ireo pejy haingana; na izany aza, tsy mbola nahita fahabangana aho ary any ivelan'i Kalifornia ny mpampiantrano ahy.
Raha mihazakazaka bilaogy ianao, tranokala na rindranasa ecommerce ary tsy afaka mivelatra amin'ny fampidirana cache, na serivisy fanaovana cache ambony toa an'i Akamai… ity no vahaolana mety indrindra aminao! Ny fotoana fandefasana pejy dia manadanja indrindra amin'ny fampitomboana ny tahan'ny click-through sy ny laharana amin'ny motera fikarohana. DNS mpivady iray miova (izay voarakitra an-tsoratra tsara) ary miatrika ny CloudFlare ianao!
Tags: fomba fitenygooddatatantaratrano fandraisam-bahinymanao ahoana ny teti-bolan'ny marikatetibola media sosialyny fanjakan'ny fiaraha-moninafampiharana wildfire
Aiza no hifantohana ny varotra B2B anao
TweetTwo: Hafatra mety, fotoana mety, toerana mety
30 Aogositra 2011 amin'ny 4:56 PM
Nampiasa Cloudflare hatramin'ny lohataona aho ary nahita zavatra mitovy. Tena tsara ny hanafainganana tranonkala ary raha sendra tsy midina ny tranokalanao dia afaka mitazona ny kinova an-tserasera mandritra ny fotoana fohy izy ireo. Izy io dia tsy maintsy misy serivisy isaky ny tranokala amin'izao fotoana izao.